Magaalichatti konkolaachiftootarratti qajeelfamni haaraan Birrii 1500 hanga 500 adabsiisuu ifoome – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Magaalichatti konkolaachiftootarratti qajeelfamni haaraan Birrii 1500 hanga 500 adabsiisuu ifoome
On May 4, 2021 119
Finfinnee, Eebila 26, 2013 (FBC)- Magaalaa Finfinneetti har’arra eegalee weerara vaayrasii koroonaatin walqabsiisee konkolaachiftoota hammaan ol fe’aan irratti qajeelfama haaraa Birrii 1500 hanga 500 adabsiisuu baasuu Biiroon Geejjibaa magaalaa Finfinnee beeksiseera.
Dhimmicharratti Biiroon Geejjibaa magaalaa Finfinnee ibsa laateera.
Magaalichatti konkolaattoonni tajaajilaa hawaasaaf him laannee kamiyyuu ammentaa imaltootaa ykn dandeettii fe’uumsaa teessoo konkolaataan ta’uu akka qabu hogganaan biirichaa Injinaar Sixootaaw Akaal ibsaniiru.
Bu’uruuma kanaan taaksii Minibaasiin dandeetii fe’umsaa teessummaan qixaan kan fe’aan yoo ta’u, teessoo dubaarra namoota 3 qofa fe’uu akka qaban murtaa’eera.
Awutoobiisiin deddeebisaa uummataa ammoo dandeetti fe’umsa teessumaan qixaa fi dabalataan namoota 5 akka ta’ee ibsameera.
Awutoobisii magaalaa Anbaassaa, Shaggarii fi aawtoobiisin tajaajilaa hojjettootaa daandeetti fe’umsaa isaanii teessumaan qixa ta’uu akka qabuu fi dhaabbiin fee’uuf ammoo namootaa eeyyamameef %50 ta’uu akka qabuu ibsameera.
Konkolaattoonni mil sadeen (bajaajiin) namoota 3 qofa kan fe’aan ta’uu itti gaafatamaan biirichaa himaniiru.
Minibaasoonni ammentaa qajeelfamichi kaa’eerra darban adabbii Birrii kuma 1, awutoobisii deddeebisaa uummataa Birrii kuma 1 fi 500, Taaksii fi Laadaan ammoo Birrii 500, baajajoonni, motor saayikilii Birrii 500 ni adabamuu jedhameera.
Akkasumas magaalichatti sa’aatii hojiidhaa itti bahaamuu Wiixaataa hanga Sanbataatti halkan sa’aatii 10:00 hanga sa’aatii 2:00tti konkolaattoonni jajjaboon socho’uu akka hin dandeenye ibsameera.
Qajelfamoota ittisa vaayrasii koroonaa hojiirra oolchuu dhabuu fi konkolaachisaa fi gargaaraan maaksii osoo hin kaawwatiin yoo argaman Birrii kuma 1, wayita namoota maaksii hin uffannee fe’aan ammoo Birrii 500 ni adabsiisaa jedhameera.
Akkasumaas konkolaachisaan yoo saanitaayizaarii hin fayyadamnee Birrii kuma 2, yeroo hojiitti hojii malee yoo dhaabbatee taaksiif Birrii kuma 1, awutoobisiin Birrii kuma 2, awutoobisii deddeebisaa uummaataaf Birrii kuma 1 fi 500 kn adabsiisuu ta’uu ibsameera.
Obbo Dammaqaan ergaa baga geessanii Ayyaana Iid Al Faxirii dabarsan
Gochaa gaariin wayita baatii Ramadaanaa muul’atu yeroo hunda cimee itti fufuu qaba…
Obbo Dammaqaan ergaa baga geessanii Ayyaana Iid Al Faxirii…
Oduu biyya keessaa6792